Hawks icela usizo ngophenyo | News24
Hawks icela usizo ngophenyo
Kusolwa ukuthi lo osesithombeni engawalekelela amaphoyisa ngokuphenya ubugebengu obenzeka ezindaweni zase North Coast. x
AMALUNGU eHawks acela umphakathi ukuthi uwalekelele ngokuphenya ubugebengu obenzeka ezindaweni zase North Coast. Kusolwa ukuthi lo osesithombeni engawalekelela amaphoyisa ngokuphenya ubugebengu obenzeka ezindaweni zase North Coast.
Umuntu onolwazi ngokuthi lo osesithombeni engatholakala ukuphi unxuswa ukuba axhumane namaphoyisa ngokushesha.
Kubikwa ukuthi ngomhlaka 17 kuMfumfu (October) kulonyaka ngabo 11:45am, abasebenzi bakwa Engen, yaKwaDukuza, bangenelelwa abasolwa abayisithupha ababehlome ngezibhamu ze-AK47.
Ngokusho kombiko ovela emaphoyiseni, abasolwa bantshontsha imali base bedla phansi ngemoto yohlobo lwe Audi emhlophe kanye neye Opel.
Amaphoyisa asola ukuthi lezi zimoto zake zasetshenziswa kwezinye izigameko zobugebengu.
Kusolwa ukuthi owesilisa lo osesithombeni engaba nolwazi ngobugebengu obenzeka kuMandulo (September) 2015 enxanxathela yezitolo eMandeni. Amalungu omphakathi anxuswa ukuthi axhumane nomseshi uWarrant Officer Sibusiso Meshack Ntshangase enombolweni ethi: 031 333 8000 noma ethi 082 520 881. Noma bethinte inombolo ye Crime Stop: 08600 10111.